Sheekh Shaakir “Wixii maanta ka dambeeyo go’aanka dowladda dhexe ayaa ka shaqeyn doono Galmudug” – Kalfadhi
Madax Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in degaanada Galmudug wixii hadda ka dambeeyo uu ka shaqeyn doono amarka Dowladda Federaalka Soomaaliya islamarkaana uu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay Galmudug iyo Dowladda.
“Aniga oo ku hadlaya magaca Galmudug waxaana cadeynayaa in ay bilaabatay wadashaqeynta dowladda federaalka iyo Galmudug, hadda wixii ka dambeeyana halkaan waxaa ka shaqeyn doona amarka dowladda dhexe” ayuu yiri Sheekh Shaakir Macalim Xasan.
“Waxaa jira qodobo iyo waxyaabo aan isla meel dhignay oo aan ku heshiinay Annaga iyo Dowladda Dhexe waxaana rajeyneynaa in loo fulin doono sida ugu macquulsan” ayuu hadlakiisa sii raaciyay madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Shaaki Macalim Xasan.
Markii uu hadalkaan sheegayay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaa garab taagnaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre oo boqosho kujoogo magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galmudug.
Dhanka Kale madaxa Xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in ay maamulka Galmudug uu ku guuleestay in degaano badan ay ka saaraan Al-shabaab.
“Waxaan ka saarnay Al-shabaab dhul ballaaran oo katirsan Galmudug mana ka harin waxaa noo qorsheysan in aan ka saarno guud ahaan Galmudug oo ay dhib badan ku haayaan shacabka deggan” ayuu yiri madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir.
Hadalkaan ayaa Sheekh Maxamed Shaakir waxa uu ka jeediyay munaasabad lagu soo dhaweynayo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.